ဂိုး သွင်းကောင်း တဲ့ တိုက်စစ်မူး – Hlataw.com
ရေ မိုးချိုးအဝတ်အစားလဲပြီး ဘောလုံးပွဲကြည့်ဖို့ ဦးချိန်တီ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဘက်ထွက်လာတော့ပဲ။ အချိန်က ညဆယ်နာရီရှိနေပြီဖြစ်သည်။ သည်နေ့က မီးပျက်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် တစ်လမ်းလုံး မှောင်မဲနေသည်။ မီးစက်ထွန်းဖို့နေနေသာသာ မီးလာရင်တောင် ထွန်းဖို့အိမ်ရှေ့ မီးတိုင်မရှိသည့် သူ့ရွာထဲက အိမ်တွေ သည်အချိန်ဆို တစ်ရေးတောင် ရနေလောက်ကြပြီ။ မအိပ်သေးတဲ့ အိမ်တစ်ချို့မှ ဖယောင်းတိုင် မီးရောင်ကလည်း မှိန်ပြပြသာ….. လရောင်ကိုပဲ အားကိုးလို့မရတာရယ် အရေးအကြောင်းရယ်မှာ သုံးဖို့ သုံးတောင့်ထိုး ဓာတ်မီးကတော့ မပါမဖြစ်ပေ၊ သည်နေ့ သိပ်ကြိုက်ရသည့် အင်္ဂလန် ပရီးမီးယားလိဂ် ဘောလုံးအသင်း မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပွဲရှိ တာကြောင့် သိန်းဝင်းတစ်ယောက် တစ်မနက်လုံး ယောက်ယက်ခက်နေတာဖြစ်သည်။အလုပ်မှာ ဘာလုပ်လုပ် ကပျက်ကချောနှင့် အလွဲလွဲအချောချော ပျာပျာသဲလဲ ဖြစ်နေသည့်သူ့ကို ဝပ်ရှော့ဆရာ ကိုတောကြီးတို့က ဆဲရတာလည်း အာပေါက်မတက် ပင်ဖြစ်နေမှာသေချာသည်။
ရွာလယ်မှာ ဖွင့်ထားသည့် ဦးချိန်တီ ရဲ့ လက်ဖက်ရည် ဆိုင်နဲ့ သူနေသည့် အိမ်က မိနစ် ၂၀ လောက်သာ လျှောက်ရပေမယ့်လည်း မန်ယူနိုက်တက်ပွဲ ဖြစ်တာကြောင့် လူများမှာ ကြိုသိနေသည်။ ထို့ကြောင့် သိန်းဝင်းတစ်ယေါက် ဘောလုံးပွဲမစခင် နှစ်နာရီလောက် အလိုကတည်းက ကြိုထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ မီးပျက်ရက် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ဦးချိန်တီက ဘောလုံးပွဲလာသည့် ရက်တိုင်း မီးမလာလည်း မီးစက်နိူးပြသောကြောင့် ဆိုင်မှာ လင်းထိန်ဆူညံ နေမှာသေချာသည်။သိန်းဝင်းတို့ ကုက္ကိုလ်ကိုင်းရွာအပြင် အနီးက ကျဲစု ၊ သရက်တော ရွာတွေမှာပါ ဦးချိန်တီလို မီးစက်နိူးပြီး ဘောလုံးပွဲ ပြသည့် လက်ဖက်ရည်က မရှိတာကြောင့် အခုချိန်လောက်ဆို ဆိုင်မှာ ဘောလုံးပွဲလာကြည့်သည့် လူတော်တော်များနေမှာသေချာသည်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သိန်းဝင်းစောပြီး ထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟင်း….ဟင်းသိန်းဝင်းရဲ့ ဝီရိယကိုဘယ်သူယှဉ်မှာ လဲလေ ၊ ဘောလုံးပွဲက ည ၁၂မှ စမှာဖြစ်ပေမယ့်လည်း သူက ၁၀နာရီ၂၀လောက်ကြိုရောက်နေမှ တော်ကာ ကျမည် ၊ ဆိုင်ရောက်လျှင် သူထိုင်နေကျ နေရာမှာ ကြိုနေရာယူထိုင်ရင်း သိပ်ကြိုက်သည့် လက်ဖက်ရည် ကျောက်ပန်းတောင်း ကို မှာသောက် တစ်ခွက် အရင်ကြိုမှာသောက်ထားမည်။
ဘောလုံးပွဲပြမှ ကြည့်ရင်း နောက်တစ်ခွက် ထပ်မှာသောက်မည်။ အဲ့အချိန်ကျ မှ မုန့်ပါမှာစားချင်စားမည် ဘောလုံးပွဲမပြခင် ပထမလာချပေးမည့် လက်ဖက်ရည်သောက်ရင်း ဆေးပေါ့လိပ်ထုတ်ဖွာရင်း သူနဲ့လေပေးဖြောင့်သူတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စကားပြောမည် သူနဲ့အမြဲ မန်ယူနိုက်တက်ပွဲ ကြည့်နေကျ ဦးလှဦးနဲ့မိုးမြင့်လာရင် ပိုပြီး လေပေါလို့ကောင်းသည်။ သူတို့သုံးယောက်ဆုံမိပါက မပြီးတော့ပေ ၊ ဘောလုံးအကြောင်းမှသည် နိုင်ငံရေး စီးပွားရေး လူမူရေးနဲ့နောက်ဆုံး သင်ဇာဝင့်ကျော် ဘောလီမပါသည့် ကိစ္စအထိ လေထိုင်ပစ်ကြမည်။ လက်ဖက်ရည် တစ်ကျိုက် ဆေးလိပ်တစ်ဖွာနဲ့ လေထိုင်ပွားပြီး ပြောလို့မောသွားကြတာနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် ဘောလုံးပွဲကလည်းစနေရမည် ပြီးပြီ ၊ ဒါ သိန်းဝင်းရဲ့ ဘောလုံးပွဲကြည့်သည့် အစီအစဉ်ဖြစ်လေသည် ၊ သိန်းဝင်းသည် စိတ်ရင်းကောင်းသည်။
သို့သော် ကယောက်ကယက်နိုင်သည်။ ကျပ်သိပ်မပြည့်ချင် သည်ကြားထဲ ကိစ္စတစ်ခုကို သင်ပြရှင်းရ တော်တော်ခက်ခဲသည့် လူမျိုးဖြစ်သည်။ သို့သော် ဖင်ပေါ့သည် ခိုင်းကောင်းသည်။ စိတ်ဓာတ်ကလေး ကောင်းသည်။ ဒါ့ကြောင့် ကိုတောကြီးက သူ့ဝပ်ရှော့မှာ သိန်းဝင်းကို တောက်တိုမယ်ရ ခိုင်းဖို့ ခေါ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ လစာလည်း ကျန် အလုပ်သမားတွေနဲ့တန်းတူ ပေးတော့အဆင်ပြေသည်။ သနားလို့ခေါ်ထားတဲ့သိန်းဝင်းအနေနဲ့ ကလည်း ထင်မှတ်သလောက် ဖြစ်မလာတဲ့အပြင် သင်ရကြားရ ခက်ခဲပြီး ဒုံးဝေးလွန်းသောကြောင့် ကိုတောကြီးခင်ဗျာ တပည့်တစ်ယောက်.မွေးမည့်အစီအစဉ်ကိုတော့ လက်လျော့ ထားရသည်။ ဒါပေမယ့် သိန်းဝင်းက ဖင်ပေါ့ခိုင်းကောင်းပြီး အားကိုးရလို့တော်သေးသည်။
ဘယ်သူအော်အော် ဘယ်သူဆဲဆဲ သနားကမား မျက်နှာငယ်လေးနှင့် စပ်ဖြဲဖြဲလုပ်နေတက်သည့် သိန်းဝင်းကို ဝပ်လျှော့ တစ်ခုလုံးက အလုပ်သမားတွေက ချစ်ကြသည် အင်း….. ကိုတောကြီးအပါဝင်ပေါ့လေ။ သိန်းဝင်းတစ်ယောက် ဆိုင်ရောက်တော့ ဆိုင်မှာ လူသိပ်မကျသေး ၊ သူ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်ရင်း လက်ဖက်ရည် ဖျော်နေသည့် ဦးချိန်တီကို လက်ညိုးထောင်ပြလိုက်သည်။ ဦးချိန်တီကလည်း အလိုက်တသိ သူ့ကိုပြန်ခေါင်းညိတ်ပြပြီး လက်ဖက်ရည် ဆက်ဖျော်နေလိုက်သည်။”ဟား ဟေ့ယောင် သိန်းဝင်း မင်းမန်ချက်အကျီုဘာလို့ ဝတ်မလာတာလဲ သည်နေ့အိမ်ကွင်းလေကွာ အောင်ပွဲခံရမယ့်အချိန်လေ ” ရေနွေးကြမ်းသောက်နေတုန်း နောက်ကနေ ပခုံးကို ပုတ်ရင်းသူ့ဘေးကခုံမှာ ဝင်ထိုင်ပြီးပြောလိုက်သူက မိုးမြင့်ဖြစ်သည်။ မိုးမြင့် က သူ့ကို မေးရင်း လက်ဖက်ရည် တစ်ခွက်လှမ်းမှာသည်။ “ဟင့်အင်း…လျှော်ထားတာ. မခြောက်သေးလို့ မဝတ်လာတာကွ ငါမနေ့က အလုပ်မသွားခင်ကတည်းက မြင့်ဝင်းကို ပြောထားတာပဲ ဒါကို သည်ညနေ မှ လျှော်တယ်တဲ့လေ မပြောချင်တော့ပါဘူး ကွာ …. အဲ့တာကြောင့် မဝတ်လာတာ နို့မို့ဆိုလို့ကတော့ မင်းကလည်း ဘယ်ရမလဲ……” သိန်းဝင်းရဲ့ တုံ့ပြန်စကားကို မိုးမြင့်က ရေနွေးကြမ်းကို ဖူးဖူးမူတ်သောက်ရင်းနားထောင်နေလိုက်သည်။
ခနေနေတော့ ဦးချိန်တီက လက်ဖက်ရည် နှစ်ခွက်လာ ချပေးသည်။ လက်ဖက်ရည် လာချပေးရင်း သိန်းဝင်းကိုကြည့်ကာ “ကောင်လေး စနေမန်ချက် စီးပွားပျက်တဲ့ မင်းမန်ယူတော့ သည်ညနားကားပြီ ” ဆိုပြီးနောက်သွားသေးသည်။ သိန်းဝင်း တစ်ယောက် ပြန်ချေပဖို့ကြိုးစားစဉ်မှာပဲ ဦးချိန်တီက ရယ်ပြီး ပြန်ထွက်သွားသည်။ သူ့ဘေးက မိုးမြင့်ကလည်း တစ်ခွီခွီရယ်ပြီး “ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် မင်း…မန်ယူအကျီမဝတ်လာတာတော့ မမိုက်ဘူးကွာ တစ်ထည်တည်းကတော့ အဆင်မှ မပြေတာမင်းမိန်းမကို ဝယ်ခိုင်းပေါ့ ” လို့ပြောတော့ သိန်းဝင်းက လက်ကာပြပြီး “ဟာ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ သူ့မှာလည်းပိုက်ဆံလည်း ရှိတာ မဟုတ်ဘူး ပြီးတော့ ငွေကိုချွေတာ စုနေရတဲ့ အချိန်ဆိုတော့ မဖြစ်ပါဘူး ပြီးတော့သူလည်း အခုဆို ဒါရှိနေပြန်ပြီ” သိန်းဝင်းကပြောရင်း သူ့ဗိုက်ကိုလက်နဲ့ပွတ်သည့် ဟန်လုပ်ပြသည် မိုးမြင့်က “ဟာ….ငါ့ကောင်ကြီး တယ်စွမ်းလှပါလားဟ ဘယ်နှစ်ယောက်မြောက်လဲဟ မင်းနှယ် ဘောလုံး တသင်းစာများထောင်မလို့လားကွာ ကလေးတွေ မွေးခိုင်းလှချည်လားကွာ ငါ့နှယ် ကြိုးစားလှချည်လား…..” သိန်းဝင်း ကတော့ ရယ်ကျဲကျဲနဲ့ပဲ “ဟာဗျာ ဒါတွေခင်ဗျားမသိပါဘူး…..” လို့ပဲပြောတော့သည်။
လရောင် မစိုမပို့ အလင်းရောက်အောက်က မီးချိတ်မီးကပ် ဝါးတိုင်နှစ်ခုတင်ထားသည့် ဓနိမိုး တဲအိမ်လေးထဲမှာတော့ ဖယောင်းတိုင် မီးအရောင်နဲ့ အရိပ်နှစ်ခု လေနှင်ရာအတိုင်းရွေ့လျားနေကြသည်။ “အား…ချစ်လိုက်တာကွာ…..မြင့်ဝင်းရာ….. နင်က အပြုစုအရမ်းကောင်းတာပဲ နင့်စောက်ဖုတ်က လိုးလိုအရမ်းစီးပို်င်နေတာပဲ နင့်နို့တွေကလည်း မကျနိုင်တော့တဲ့အပြင် အခုစုပ်နေတဲ့ အချိ်န်အတွင်း ပိုပိုကြီးကြီးလာတော့ ငါပြန်တောင်ထလာပြီ ” မင်းထက်က လှဲနေရင်းသူ့ဘေးက မြင့်ဝင်းကို သိုင်းဖက်ထားကာ နို့နှစ်လုံးကိုလျှာနဲ့ အရသာခံစုက်ပေးနေသည်။မြင့်ဝင်းကလည်း ပထမတစ်ချီ မင်းထက် လှေကြီးထိုး လိုးသမျှကို ကော့ကော့ခံပေးခဲ့ပြီး ပြီးသွားခဲ့ပေမယ့်လည်း ယခုလို သူ့နို့နှစ်လုံးကို အားပါးတရ လျှာအရသာခံနေတာ ကြုံရတေ့ တဏှာစိတ်ကပြန်ထလာသည်။ အမှန်တော့ မြင့်ဝင်း က သိန်းဝင်းရဲ့ မိန်းမဖြစ်သည်။ သိန်းဝင်းလို မဲမဲသဲသဲ ကြောင်တောင်တောင်နဲ့ မြင့်ဝင်းလို ရွှေဘိုမင်းကြိုက် ခြေတံရှည်လက်တံရှည် လုံးကြီးပေါက်လှတို့ ဖူးစာစုံခဲ့ကြပုံကထူးဆန်းသည်။
နှစ်ဖက် ဆင်းရဲသားမိသားစုနှစ်ခုမှ ပေးစားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည် ၊ မြင့်ဝင်းက လည်သည် ရှုပ်သည် နှပ်သည် သိန်းဝင်းက မအူမလည်။ လင်မရခင်ကတည်းက ရွာမှာ ရည်းစားတွေထည်လဲ တွဲနေသည့် မြင့်ဝင်းကို မိဘတွေက သိန်းဝင်းနဲ့ ပေးစားတော့ ရွာကတစ်ချို့ သိန်းဝင်းကို နွားဖြစ်ပြီဟု သမုတ်ကြသည်။ အပေါင်းအသင်းများက ကြုံရင် ကြုံသလို သိန်းဝင်းကို “ဂျိုပေါက်နေပြီလား ၊ ပခုံးကောင်းတယ်နော်” စသဖြင့် စကြနောက်ကြသည်။ ဒါပေမယ့်သိန်းဝင်းက မြင့်ဝင်းကိုတော့ တော်တော်ချစ်သည်။ သူရှာရသမျှ ပိုက်ဆံ မြင့်ဝင်းကို တစ်ပြားမချန်အပ်ပြီး သူအသုံးလိုမှ တောင်းသုံးသည်။မြင့်ဝင်းမျက်နှာတစ်ချက်ပျက်တာ မလိုလားသော သူဖြစ်သည် ၊ မြင့်ဝင်းကရော သိန်းဝင်းကို ချစ်လားမချစ်လားမသိ သိန်းဝင်းနဲ့ညားပြီး မကြာ ရပ်ကွက်ထဲက ကာလသားခေါင်း ကျော်မိုးနဲ့ စငြိစွန်းသည်။ ကျော်မိုးက လည်းကြာသမားဖြစ်သလို မြင့်ဝင်းကလည်း လင်ဖြစ်သူ သိန်းဝင်း တစ်ယောက်တည်းနဲ့ အာသာမပြေပဲ ဗီဇအရ ဖောက်ပြန်ချင်လို့လားမသိ။ သိန်းဝင်းက လူသာကြောင်ပေမယ့် လိုးအားကောင်းသည်။ လီးတုတ်သည် ရှည်သည်။ ဒါတောင် မြင့်ဝင်းကမရချင် ၊ ကြာသမား ကျော်မိုး၏ ဂွင်ထဲပျော်ပျော်ကြီး ဝင်ဆင်းရင်း နှစ်ယောက်သား သိန်းဝင်းမရှိချိန် အိမ်ပေါ်ထိ သောင်းကျန်းကြသည်။
မြင့်ဝင်းလည်း ကျော်မိုးနဲ့ ရိုးအီလာသောအခါ ရွာထဲက လူပျိုကြီး ကိုတုတ်ပေါနဲ့ ဖြစ်ပြန်သည်။ သည်တစ်ခါတော့ ကိုတုတ်ပေါကစခြင်းမဟုတ် မြင့်ဝင်းကိ်ုယ်တိုင်ကိုက ယုန်ကမတိုး ပိုက်ကတိုး ခြင်းဖြစ်သည်။ မြင့်ဝင်း၏ မာယာကျော့ကွင်း အောက် လူပျိုကြီး ကိုတုတ်ပေါတစ်ယောက် မျော်ပါမိသည့် အချိန်မှစ၍ အရူးအမဲသားကျွေးသလိုဖြစ်သွားသည်။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုး စောက်ဖုတ်မတွေ့ခဲ့ဖူးသော ကိုတုတ်ပေါတစ်ယောက် မြင့်ဝင်း၏ အဆက်အပေါက် အရှိုက်အဟိုက်များကြောင့် တိမ်းညွတ်ခဲ့သလို မြင့်ဝင်း၏ ကိုယ်လုံးတီးအလှ ရင်သားများ တင်ပါးများကို အရှင်လတ်လတ် တွေ့ပြီးချိန်မှာတော့ ရောဂါမတရားဖြစ်လာတော့သည်။ မြင့်ဝင်းကို မလိုးရ မနေနိုင်ဖြစ်လာပြီး လောဘလည်းကြီး လာသည်။မြင့်ဝင်းနဲ့ ဆက်ဆံနေရတဲ့ အချိန်တွေဆို သူ့ဘဝကြီးက စိုပြေနေသည်ဟုထင်သည်။ သို့သော် လူပျိုကြီး ကိုတုတ်ပေါနဲ့သုံးလလောက်အဝ လိုးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ ကိုတုတ်ပေါကို အဆင်ဖြတ်လိုက်ပြီး နောက်ဆုံးမြို့မှ ရွာကို စာလာသင်သည့် ကျောင်းဆရာ မင်းထက် နဲ့ ကုန်းပေးဖြစ်တာဖြစ်သည်။ ကိုတုတ်ပေါခင်ဗျာ အရူးအပေါကြီးဖြစ်ကျန်ခဲ့သော်လည်း မကြာပါ အခြားတစ်ရွာမှ မိန်းမတစ်ယောက်ကောက်ယူသွား၍ မြင့်ဝင်းစိတ်အေးသွားရသည်။ မြင့်ဝင်းတစ်ယောက် ဘယ်လောက် ဖင်သရမ်းသရမ်း လိင်ဗဟုသုတတော့ရှိသည်။
နိုင်ငံခြားအပြာကား စာအုပ်များဖတ်ဖူးကြည့်ဖူးတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ လိင်ဆက်ဆံပုံတွေအကုန်သိသည်။ ပါးစပ်နဲ့ အားပါးတရ ဆက်ဆံတာ ၊ ဓမ္မတာမဟုတ်တဲ့ ဖင်ကိုပဲ ဆက်ဆံတာတွေအကုန်သိသည်။ ယောကျာ်းတကာ လီးအားပါးတရ စုပ်ပေးဖူးသောလည်း ယောကျာ်းဖြစ်သူ သိန်းဝင်းလီးကိုတော့ မြင်တောင် သိပ်မမြင်ဘူးချင် ၊ သိန်းဝင်းလိုးပြီဆို မျက်လုံးမှိတ်ကြိတ်ခံနေတာ များသည်။ ဟန်ဆောင်ခြင်းပါလေ။ ဒါ့အပြင် လိင်ကြောင့် ဖြစ်တဲ့ရောဂါတွေအကြောင်းကိုလည်း မသိချင်မှ အဆုံးသိနေရတော့ ဆက်ဆံမယ့် ယောကျာ်းတိုင်းကို ကွန်ဒုံးအကာကွယ်သုံးခိုင်းသည်။ယောကျာ်းနဲ့နေပြီးတိုင်းဆေးသောက်သည်။ ဒါ့ကြောင့် သိန်းဝင်းတစ်ယောက် သူဘယ်လောက် ကြိုးစားကြိုးစား သားသမီးမရခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ရွာမှာ စာလာသင်ပေးသည့် ကျောင်းဆရာလေး မင်းထက်က ငယ်သည် ချောသည်။ ထို့အတူ လီးလည်း ကြီးမည်ဟုထင်သည် မင်းထက်ကလည်း သူ့ကိုစိတ်ဝင်စားနေကြောင်းသိသာသည် ။ မင်းထက် ကအမှန်တော့စားနေကျကြောင်ဖားပင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြွေမြွေချင်းခြေမြင်ကာ နှစ်ယောက်သား လိုးဖြစ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
မင်းထက် မှာ မနက်ပိုင်းမှာ စေတနာ့ဆရာတစ်ယောက် ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ညပိုင်းမှာတော့ အအိုမုဆိုးအဖြစ် ကျင်လည်ခဲ့တာကြာပြီဖြစ်သည်။ သူလိုးခဲ့ဖူးသည့် မုဆိုးမ တစ်ခုလပ်အိမ်ထောင်သည် များစွာ ရှိခဲ့ဖူးသည်။ မင်းထက် က မိန်းမတွေ ကျအောင် ပြောတက်တာကြောင့်လည်းပါသည်။ ရုပ်ရည် ချောမောခန့်ညားသော သူ့ကို ကုတင်ပေါ်မှာလည်း နတ်ဘီလူးတစ်ကောင်ကဲသို့ စွမ်းဆောင်နိုင်တာကို တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အခုသည် ကုက္ကိုလ်ကိုင်းရွာမှာလည်း သူကြီးကတော် ဒေါ်ခင်ခင်အပြင် မမြင့်ဝင်းကိုပါ အခုစားဖြစ်နေသည်။သူကြီးကတော် ဒေါ်ခင်ခင်က တစ်ရွာလုံးမှာ အလှူဒါယကာမ ခံယူထားသူဖြစ်ပြီး ဘာသာရေး ကိုင်းရှိုင်းသူဖြစ်ကြောင်း အားလုံးက သိထားကြသော်လည်း မင်းထက်နဲ့ တွေ့ပြီးနောက်မှာတော့ မင်းထက် နေသည့်တဲကို သွားပြီး ကုန်းတဲ့အဆင့်ထိဖြစ်သွားသည်၊ မင်းထက်ကလည်း အဘွားကြီး၏အညှာကို ကိုင်တက်သည်။ သူကြီးကတော် ဒေါ်ခင်ခင်က သူကြီးဦးသာလှနှင့်အတူ သားသုံးယောက်သမီး နှစ်ယောက်နှင့်မြေး၃ယောက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း ထန်တုန်းဖြစ်သည်။ မင်းထက် က အနားယူပြီးခနအကြာမှာ လှဲနေရာမှ ထလိုက်ပြီး မြင့်ဝင်းကို ကြည့်လိုက်သည်။ မြင့်ဝင်းက အပေါ်ပိုင်းဘောလီဝတ်ထားသော်လည်း ရင်သားနှစ်ဖက်အောက်ရောက်နေသည်။
ထွန်းထားသည့် ဖယောင်းတိုင်မီးရောင်အောက်မှာ မြင့်ဝင်း၏ နို့နှစ်လုံးက အရောင်ပိုတောက်နေသလိုလို မင်းထက် အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ မြင့်ဝင်းရဲ့ နို့ကြားထဲ သူ့လီးကို ထားလိုက်ပြီး မြင့်ဝင်းကို နိူးလိုက်သည်။ ” မြင့်ဝင်း….မြင့်ဝင်း….ထ…. ထ ငါတို့နောက်တစ်ချီ လိုးရအောင်ဟ…… ထ…ထ… အချိန်မရှိဘူး… နင့်လင်ကပြန်လာတော့မှာ…. ဘောပွဲလည်း ပြီးတော့မယ်…..” ပြောလည်းပြောလှဲနေတဲ့ မြင့်ဝင်းရဲ့ ရင်ဘက်ပေါ် တက်ခွလိုက်ရင်းနို့ကြားထဲသူ့လီးကို အပေါ်အောက် ပွတ်ဆွဲပေးနေလိုက်သည်။မြင့်ဝင်းက အိပ်ချင်မူတူးပုံစံနဲ့အတူနိုးလာပြီး “အင်း….လိုးလေ….လိုး…..ရတယ်…လေ….” လို့ပြောရင်း သူ့နို့ကြားထဲ ဝင်ပြီးနယ်နေသော မင်းထက်လီးကို လျှ၊နဲ့အရသာခံပေးလိုက်သည်။ “အ့..ရှီး…ကောင်းလိုက်တာ….အ့…အ့…..” မင်းထက်တစ်ယောက် မြင့်ဝင်း၏ ရင်သားနှစ်လုံးကြား ထဲက သူ့လီးကိုထုတ်လိုက်ပြီး နို့တံမဲမဲ ကြီးကို ကောက်စို့သည်။ စို့လို့ကိုမဝနိုင်ပေ မြင့်ဝင်းက ကလေးသာမရှိတာ အအိုနို့ဖြစ်နေပြီဖြစ်သလို မင်းထက်တို့ လက်ချက်ကြောင့် နို့အုံမှာ အစဉ်အမြဲ တင်းရင်းကာ နို့တံမဲမဲကြီးများက ကာမစိတ်ကို ပိုထကြွစေသည်။
အားပါးတရ စို့ပေးပြီးသောအခါ မြင့်ဝင်းကိုထခိုင်းလိုက်သည်။ မြင့်ဝင်းက လှဲနေရာက ထလိုက်ပြီး ပျက်နေသော ဆံပင်ကိုပြန်ပြင်နေတုန်း မင်းထက် က နံရံထောင့်ကို မှီထိုင်လိုက်သည်။ ပြီးတော့ မြင့်ဝင်းဆီက ကိ်ုယ်ပေါ်က လက်ကျန်ဘောလီပါ ဆွဲချွတ်ရင်း သူ့ပေါင်ပေါတက်ခွ ထိုင်ခိုင်းလိုက်သည်။ “လာ မြင့်ဝင်း…..နင်ငါ့ပေါင်ပေါ်ကနေ တက်ထိုင်ဆောင့်ပေး…” မြင့်ဝင်းကလည်းနှစ်ခါမပြောရ မင်းထက် ပေါင်ပေါ်တက်ခွကာ လီးနဲ့သူ့စောက်ဖုတ်ချိန်သား တကျဖြစ်အောင် လုပ်ရင်းထိုင်ထစလုပ်သည်။”အ့…ကျွတ်..ကျွတ်…ရှီး…ဟုတ်တယ် အဲ့အတိုင်း… အ့….အ့… အင်း…ဝင်နေပြီ….အ့….အ့… သည်တိုင်းပဲ ထိုင်ထမလား…… ” “အင်း…. အခုက နင်ခနထိုင်ထပေးနှင့်ဦး အရှိန်ရမှ ငါ…ဆောင့်မယ်….” မင်းထက်ကပြောလည်းပြော သူ့အပေါ်တက် ဆောင့်ပေးနေတဲ့ မြင့်ဝင်းရဲ့ နို့တွေကို လိုက်စို့ပေးနေမိသည်။ နောက်နံရံမှီရင်းမြင့်ဝင်းရဲ့ စည်းချက်အညီ ခုန်တက်နေတဲ့ နို့နှစ်လုံးကို မရမက လိုက်ဟက်နေရင်း တစ်ခါတစ်ခါ အားမရလို့ မြင့်ဝင်းကိုယ်ကိုအတင်းဆွဲဖက်ပြီး နို့တွေကို အားပါးတရ ခေါင်းနှစ်ပြီးလည်း စို့တက်သေးသည်။
မြင့်ဝင်းခင်ဗျာလည်း လင်ဖြစ်သူ သိန်းဝင်းပြန်မလာခင် အပြည့်အဝကာမအရသာကို ရသလောက် ခံစားနေမိသည်။ မင်းထက်အပေါ်ကနေ မင်းထက် ပုခုံးကိုကိုင်ရင်း ထိုင်ထလုပ်ပေးနေရင်း သူ့ရင်သားတွေကို မင်းထက်က တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ရင်း ကလေးတစ်ယောက်လိုအားပါးတရ စို့နေတာကိုကြည့်ရတာ သူ့ကိုစိတ်ပိုပါစေသည် ။ ထို့ကြောင့်လည်းမင်းထက်ခိုင်းသမျှ အရှက်ကုန် လိုက်လုပ်ပေးနေမိတာဖြစ်သည်။”ရပြီအစ်မ…ခနရပ်… ကျွန်တော်ဆောင့်ချင်နေပြီ…. အ့….အ…..အာ့…..” မြင့်ဝင်းထိုင်ထလုပ်နေတာကိုရပ်ခိုင်းလိုက်ပြီး သူကနောက်နံရံကိုပြန်မှီလိုက်သည်။ မျက်နှာချင်း ဆိုင်အနေအထားနဲ့ သူ့အပေါ်ထိုင်နေသော မြင့်ဝင်း၏ တင်ပါးကိုလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်တင်းတင်း ကျပ်ကျပ်ဆုပ်ကိုင်ပြီး ရှေ့တိုးနောက်ငင်လုပ် ပေးနေလိုက်တော့သည်။ မြင့်ဝင်း၏ ဖင်လုံးကြီးကိုအားပါးရညစ်ကိုင်ရင်း ဆောင့်ဆောင့်လိုးပေးနေရင်း အော်ညီးနေတဲ့ မြင့်ဝင်း၏ ဆံပင်တွေကို ဆွဲဆောင့်ရင်း လည်ပင်းမှ ရင်သားအထိ မှီသလောက် ကို လျှာနဲ့အရသာခံ ပေးနေသလို မြင့်ဝင်းကလည်း အပေါ်ကနေ မင်းထက်၏ ရှေ့တိုးနောက်ငင်လိုးသမျှကို ကော့ခံပေးရင်း မင်းထက်သူ့နို့စို့နေသည့် အချိန်တွေဆို မင်းထက်ခေါင်းက ဆံပင်လေးတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေမိသည်။
အခုလိုလိုးတာက နှစ်ယောက်လုံးအတွက် ပိုသက်သာသည်ဟု မင်းထက်ထင်သည် ။ ကုတင်ပေါ်ခြေဆင်းတက်ထိုင်ကာ နောက်ဝါးထံရံကို မှီရင်း သူ့အပေါ်တက်ထိုင်နေသော မြင့်ဝင်းရဲ့ ဖင်ကို အားပါးတရ ဆုပ်ကိုင်ရင်းရှေ့တိုးနောက်ငင် လိုးပေးနေရတာက အရသာရှိလှသည်။ သည်ကြားထဲ တစ်ခါတစ်ခါစိတ်ပါသွားပါက လိုးပေးနေရင်း လူပ်ခါနေသည့် မြင့်ဝင်းနို့တွေကို လက်နဲ့တဖြန်းဖြန်းရိုက်တက်ပြီး နှစ်ယောက်သား အားပါးတရ နူတ်ခမ်းချင်းစုပ်နမ်းတာမျိုး လိုးနေသည့် အရှိန်ကိုလျှော့ကာ လီးကို စောက်ဖုတ် အထဲ စိမ်စိမ်လိုးတာမျိုး မြင့်ဝင်းရဲ့ဆံပင်ကို အားပါးတရ ဆောင့်ကိုင်ထားရင်း လိုးတာမျိုးတို့လုပ်ပေးဖြစ်သည်။ ဓနိမိုးဝါးထံရံကာ ၁၀ပေပက်လည် တဲလေးထဲ နှစ်ယောက်အိပ် ဝါးကုတင်ပေါ် စောင်ကြမ်းတွေခင်းရင်း လိုးနေကြသည့် လူနှစ်ယောက်၏ တဏှာတေးသွား များကလမသာသောညမှောင်မှောင်တွင် ပျံ့ လွင်နေသည်။
သူတို့နှစ်ယောက်၏ ကာမရေယာဉ်ကြောကို အခုချိန် ထိ မသိသေးသော သိန်းဝင်းခင်ဗျာမှာတော့ ဘောလုံး ပွဲကိုသာ အာရုံရောက်နေလေသည်။ သည်အချိန်တွင် သိန်းဝင်းအာရုံထဲ ဘာမှမရှိ မန်ယူသာရှိသည်။ အခုချိန် မိန်းမသူများလိုးနေတယ်ဆိုလည်း အာရုံစိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ ဘာကြောင့်ဆို သူအားပေးသည့် မန်ယူက ပြိုင်ဘက်အသင်းနဲ့ နှစ်ဂိုးနှစ်ဂိုးဖြင့် သရေကျနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ “ဟုတ်ပြီ…..ဆွဲလာ…အေး…ဟုတ်တယ်… ပေးလိုက်လေ… ဟ….ပေးလေ…ကွာ….. တောက်ကွာ…. ညံလိုက်တာ…. လူတောင် မပေးတက်ဘူးလား…ကွာ……” ” ဟ…ဂိုးပေါက်တည့်ကြီးကန်လေကွာ…..ဟ…. သွင်းလေ……သွင်သွင်း…..ဟုတ်ပြီ… ကန်.အဲ…. ဟာ….. ငှက်လာပြစ်နေတယ် ” တစ်ဆိုင်မှာလုံးမှာ မန်ယူအသင်းကို အားမရဆုံးက သိန်းဝင်းဖြစ်လေသည် ။ ဘာမဟုတ်သည့် ပြိုင်ဘက်အသင်းသေးကိုမှလာပြီး သရေကျနေသည့် သူ့အသင်းကို သူအားမလိုအားမရ ဖြစ်နေတာဖြစ်သည်။
“ငါသာ….ဝင်ကန်ပစ်လိုက်ချင်တယ်…လီး… လခွမ်း… သေချာကန်ကြပါဟ….နွားတွေရ….. ကန်…ဟာ…” တစ်ဆိုင်လုံးကပရိတ်သတ်တွေဟာချင်လည်း ဟာချင်စရာဖြစ်အောင် မန်ယူနိုက်တက် တိုက်စစ်က ဂိုးသွင်းမသေချာ ၊ သည်ကြားထဲ တစ်ဖက်အသင်းက ပြန်လည်ဖိအား ပေးလာမူ့ကြောင့် ပြိုင်ပွဲပြီးခါနီးမှ အနိုင်ဂိုးရသွားမည့် တစ်ဖက်အသင်းကိုလည်း သေချာထိန်းကစားဖို့ သိန်းဝင်းတစ်ယောက် အော်ပြောနေရသည်။နည်းပြဖြစ်သူ တာင် သူ့လောက်ပျာယာမခတ်နေ။ သူ့မှာတော့ ရေနွေးကြမ်းငှဲ့သောက်လိုက် လက်ခုပ်လက်မောင်းတီးလိုက်နဲ့ အလုပ်ရှုပ်နေသည်။ ထိုအချိ်န် နောက်ဆုံးမိနစ်ရောက်လာသည်။ အခုချိန်အထိ အရှုံးအနိုင်အတွက် ဂိုးထပ်မသွင်းကြသေး ၊ တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် ရှိန်နေကြသည်။
သည်ဘက်မှာလည်း မင်းထက်က မြင့်ဝင်းကို လေးဘက်ထောက်ကုန်းခိုင်းရင်း နောက်ကနေ အားပါးတရဆောင့်လိုးပေးနေချိန်ဖြစ်သည် ။ ကုတင်အစွန်းနားမှာ မြင့်ဝင်းကို ခေါင်အုံးခုထားတဲ့ အပေါ်လက်ထောက်ကုန်းခိုင်းပြီး သူက ကုတင်အောက်ခြေချကာ ဆောင့်လိုးပေးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ပြောရမယ်ဆို မင်းထက်တစ်ယောက် ကုတင်အောက်ခြေစုံချရပ်ကာ ကုတင်စွန်းနား ကုန်းပေးနေတဲ့ မြင့်ဝင်းဖင်ကြီးကို အားပါးတရ ကိုင်ဆောင့်လိုးနေခြင်းဖြစ်သည်။မာန်ပါတဲ့ဆောင့်ချက်များကြောင့် မြင့်ဝင်းရဲ့ စောက်ဖုတ်ထဲမှာလည်း နှစ်ချီမြောက် ပြီးသွားပြီ ဖြစ်တာကြောင့် စောက်ရည်တွေက လျှံတောင်ထွက်နေသလို မင်းထက်ကလည်း တစ်ချီပြီးသွားတာတောင် လီးကမကျဘဲ မနားတမ်းဆက်လိုးနေနိုင်မူ့ကြောင့် လီးနဲ့ စောက်ဖုတ် အဝင်အထွက်ဆောင့်ချက်တွေက တစ်ရှုပ်ရှုပ် တစ်ဖွတ်ဖွတ် နှင့် အသံမျိုးစုံမည်နေလေ တော့သည်။ မင်းထက်ကလည်း မော်တာစက်ပမာ သူ့လီးကို အနားတစ်စက္ကန့်တောင် မပေးဘဲ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆောင့်လိုးပေးနေရင်း ပါးစပ်ကလည်း ညစ်ညစ်ပက်ပက်တွေ ပြောကာအရသာခံနေလေသည်။
မင်းထက်တစ်ယောက် ပါးစပ်ကနေ အညှီအ ဟောက်တွေပြောကာ ခွေပုံစံ နဲ့ အားပါးတရဆောင့်ဆောင့်လိုးနေသလို မြင့်ဝင်းခင်ဗျာလည်း ကုတင်ပေါ်မှာကျကျနန ကုန်းပေးကာ လီးကြီးကြီးနဲ့လိုးဆောင့်ဒဏ်ကို အံကြိတ်ခံရင်း ဖင်ကိုပြစ်ပြစ်ပြီးပါ ခံပေးနေမူ့ကြောင့် မင်းထက်ခင်ဗျာ ပြီးတောင်ပြီးချင်လာသည်။ ခနကြာတော့ မင်းထက် ခင်ဗျာ အချိန်ကိုဆွဲထားလို့ မဖြစ်နိုင်တော့မှန်း သိလိုက်သည်။သူပြီးတော့မည် ကြိုသောက်လာတဲ့ ဆေးအစွမ်းကြောင့် ၃နာရီအတွင်း လေးချီလောက်အထိ အားပါးတရ လိုးနိုင်တာပဲ တော်ရမည် ပြီးချင်လာပြီဖြစ်တာကြောင့် ဆောင့်လိုး ပေးနေရင်း “မြင့်ဝင်း. ….အ့….အ့…ဖွတ်…ဖွတ်….ငါ… ငါပြီးတော့ မယ်….အာ့….အ့.ယ..နင်ရော….ဖွတ်ဖွတ်….. ရှီး…” “အင်း….ငါလည်းပြီးတော့မယ်….အ့….အမေ့…အ့… ဆောင့်….ဆောင့်….အာ့…. ဖွတ်ဖွတ်…ဖွတ်” မြင့်ဝင်းရောမင်းထက်ရောချွေးတွေရွှဲနစ်နေကြသည်။ နှစ်ယောက်လုံး ရည်မှန်းထားသည့်ပန်းတုိုင်ကို အမြန်ရောက်ဖို့အတွက် ကြိုးစားနေသလို တစ်ဖက်မှာလည်း မန်ယူက နောက်ဆုံးမိနစ် ထိုးဖောက်သည့်အလုံး ဂိုးရဖို့နီးစပ်ခဲ့ပေမယ့် တစ်ဖက်ဂိုးသမား၏ ဂိုးစည်းထဲရောက်မှ ဖျက်ထုတ်မူ့ကြောင့် ပယ်နယ်တီ ရလေသည်။ သည်ပယ်နယ်တီကို မန်ယူအသင်းက နံပါက် ခုနှစ် ကန်မည်ဖြစ်သည်။
“ဆောင့်….ဆောင့်….အ့…အမေ့….ဖွတ်…ဖွတ်… အ့…အမေ့…သေပါပြီ….သေပါစေ…ဆောင့်… မင်းထက်…..ဆောင့်…ဆောင့်…..အမေ့…အ့ အာ့….. အ့…..ပြီးတော့မယ်…..ပြီးတော့မယ်… အ့ာ..အ့….ငါလိုးမ…..အ့….ငါလိုး..ပဲ….အ့…..” တရားဝင် လင်ယောကျာ်းရှိသောလည်း လင်ဖြစ်သူကလည်း ကာမဆန္ဒကိုအပြည့်အဝ ပေးနိုင်ပါသော်လည်း နောက်မီးလင်းသည့် မြင့်ဝင်း နှင့် သူများမယားတစ်ခုလပ် မုဆိုးမမချန် တွင်းဟောင်းပဲ စိမ်တက်သော မင်းထက်တို့၏ တဏှာကြောက ကျယ်ပြန့်လှသလို ညီးသံ ဆဲသံ…..တဏှာသံတွေက အိမ်အပြင်သို့ ပျံလွင့်နေသည်။ သို့သော် အိမ်က အခြားအိမ်တွေနဲ့နဲနဲ လှမ်းလို့သာတော်သေးသည်။ပယ်နယ်တီ ပြစ်ဒဏ်ဘောဝင်ပါစေဟု သိန်းဝင်း လက်အုပ်ချီဆုတောင်းနေမိသည်။ တစ်ဆိုင်လုံးလည်း အပ်ကျသံပင်မကြားရအောင် ရင်ခုန်စိတ်လူပ်ရှားနေကြသည်။ အသက်ပင် မရှူရဲ ထင်ရလောက်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ပယ်နယ်တီ ကန်သွင်းမည့် နံပါတ် ခုနှစ် ကစားသမားကလည်း ချွေးသံတရဲရဲနှင့် ဂိုးပေါက်ရှေ့နေရာယူရင်း စိတ်လူပ်ရှား နေမှာသေချာသည်။
“ဝင်ပါစေ….ဝင်ပါစေ…ဝင်အောင်ကန်ပါငါ့ကောင်ရာ… ဝင်လိုက်စမ်း…ထအော်ပစ်မယ်….” အမှန်က ပယ်နယ်တီ ပြစ်ဒဏ်ဘောက ဂိုးရဖို့ အလွယ်ဆုံး နည်းဖြစ်ပေမယ့် ကစားသမားတွေအနေနဲ့ စိတ်လူပ်ရှားမူ့နှင့်ဝင်လာသည့်ဖိအားကို အသုံးမချတက်လျင် လွဲချော်နိုင်သည်။ နာမည်ကြီး ကစားသမားတော်တော်များများ လွဲချော်တက်သောကြောင့် ပယ်နယ်တီက နတ်ကြီးသည်ဟု ဆိုကြသည်။ ပယ်နယ်တီ ပစ်ဒဏ်ဘောကို ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ကကန်မှာပါ ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို က ဂိုးသမားရဲ့ ဘယ်ဘက်ကိုကန်သွင်းမလဲ ကြည့်ရင်းကနေ ပြေးလာတယ်။
နောက်ခံစကားပြောသူရဲ့ ကြေညာသံနဲ့အတူ ပါသွားသောဘောလုံးကို သိန်းဝင်းအပါဝင် တစ်ဆိုင်လုံး တိတ်ဆိတ်မူ့အပြည့်နဲ့ ငေးကြည့်နေကြသည်။ “ဆောင့်….ဆောင့်…အ့…..အမေ့……အမေ…… သေပါပြီ…. အ့…အမေ…..မေ့…” “ဖွတ်… ဖွတ်….. ဘွတ်….ဘွတ်….ဘွတ်..ဘွတ် …” “အ့…..အာ့….အာ့. .အာရှီး…..အာ့….အ့….အ့…. ….ပြီးပြီ…. အ့…ငါလိုး…ပြီးပြီ….. အား……အား… ရှီး….ရှီးပဲ….အားကောင်းလိုက်တာ ဖာသည်မရာ…. ငါလိုးပဲ… နင့်စောက်ဖုတ်ကောင်းလိုက်တာ….. ဟာ……. အား…ငါလိုး…အရည်တွေအများ ကြီးထွက်နေပြီ….ကြည့်စမ်း… အာ့… သည်ဘက်လှည့် သည်ဘက်လှည့်…” မင်းထက် က ပြီးခါနီး အချက်သုံးဆယ်ခန့် မနားတမ်းဆောင့် ပေးအပြီးမှာတော့ လရည်ပူပူပြစ်ပြစ်တွေကို မြင့်ဝင်းစောက်ဖုတ်ထဲ ထည့်လွှတ်ပေးရင်းပြီးသွားပါတယ်။
ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒို ရဲ့ ကန်ချက်ကကောင်း မွန်လွန်းလှပါတယ်။ ပြိုင်ဘက်အသင်းဂိုးသမား ဘယ်လိုမှ မတက်နိုင်ခဲ့ဘဲ လက်လျော့ပေးလိုက်ရတဲ့နောက် တစ်ဆိုင်လုံးရဲ့ ထအော်သံတွေထဲ သိန်းဝင်းအသံက အကျယ်ဆုံးပါပဲ။ သိန်းဝင်းတစ်ယောက် သူအားပေးတဲ့ မန်ယူနိုက်တက် အသင်း အခုလိုနောက်ကျခြေပဂိုးနဲ့နိုင်တော့ ထခုန်ရုံတင်မက အော်ဟစ်နေတာ မပြီးနိုင်လောက်အောင်ပါပဲ။ သည်နေ့ကတော့ သ်ိန်းဝင်းဘောလုံးပွဲကြည့်ရတာ တန်သွားပါပြီ။ နောက်ဆုံးအချိန်အထိ ဘောလုံးရသ အပြည့်နဲ အနိုင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ပါ။ မင်းထက်က သူ့ရဲ့ လက်ကျန်လရည်တွေကို မြင့်ဝင်းရဲ့ ခေါင်းကိုကိုင်ရင်း ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေး နေမိပါတယ်။
“အ့….ရှီး….ရှီးပဲ.၊ကောင်းလိုက်တာကွာ…..ငါလိုး… မြဝင်းရာ…. နင့်လင်နဲ့ငါလိုးတာ ဘယ်သူပိုကောင်းလဲ ဖာသည်မအမ်း……လီးပဲ စောက်ဖုတ်ကြီး လိုးမဝဘူး…. နင့်လင်မအေဘေးကလာတော့မယ် လီးပဲ လိုးရတာကမဝနိုင်ဘူး” မင်းထက် ရဲ့ စကားတွေကို မြင့်ဝင်းကမဖြေနိုင်သေးဘဲ မင်းထက် ရဲ့ လရည်တွေကို အရသာခံမျိုချနေမိပါတယ်။ ” အခုလိုခိုးချစ်နေရတာပဲ ကျေနပ်နေရတယ်။ဘောလုံးပွဲက တစ်ပက်မှာ ဘာလို့တစ်ရက်ပဲ ရှိရတာလဲကြာ” မင်းထက်ရဲ့ အမေးကို မြင့်ဝင်းက “သြော် အခုလိုလိုးနေရတာနဲ့ပဲကျေနပ်တော့လေ သိန်းဝင်းက ငါ့တရားဝင်လင်ဟဲ့ နင့်ငါကို တစ်ပက်တစ်ရက် လိုးရတာမဝရင် ယူလိုက်လေ သိန်းဝင်းနဲ့ငါကွာပေးမယ်” မြင့်ဝင်းရဲ့ ပြန်ပက်တဲ့စကားကို မင်းထက်က ပြန်မပြောဘဲ အကျီနဲ့ပုဆိုးပြန်ဝတ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ “ငါသွားပြီ…..သည်ရက်ပိုင်းထဲလစ်ရင်ခေါ်လိုက်ဦး …..ပြီးတော့ နောက်နေ့ငါကြိုက်တဲ့ဟင်းလေး လာပို့ပါဦး”
“အင်း….ဂရုစိုက်သွားဦးနော်….ဓာတ်မီးမပါဘူးလား လမ်းမှာ ကိုသိန်းဝင်းနဲ့လည်း တွေ့နေဦးမယ်” “အမယ်….တွေ့တော့လည်း ဘာဖြစ်လဲ နင့်လင် ဂေါက်သီးက ငါ့ကိုရိုသေပါတယ်ဟ…..ကဲကဲ သွားပြီ ငါပြောတာမမေ့နဲ့” မင်းထက် က ပြောပြီးတာနဲ့အိမ်ထဲကနေ တန်းထွက်လာလိုက်တယ်။ မြင့်ဝင်းလည်း အိပ်ရာပေါ်ကနေ မထချင် ထချင်နဲ့ထရင်း အကျီအဝတ်အစားတွေ ပြန်ဝတ်ရတယ်။ ပြီးတော့မှပဲ အိပ်ချင်ယောင်ဆောင်နေလိုက်တော့တယ် ။ သုံးနာရီနီးပါးစိတ်ရှိလက်ရှိ အလိုးခံခဲ့ရလို့ ပေါင်တွေလည်းတောင့် စဖုတ်တစ်ခုလုံးလည်း ကျိန်းနေပြီ။သူ့လင် လာလို့လိုးရင်တောင် ခံနိုင်တော့မယ်မထင် တော်တော်လေးပင်ပန်းနေပြီ ပြောရမလားပဲ….။ မြင့်ဝင်းမျက်လုံးမှိတ်ရုံရှိသေး ခြံဝက သိန်းဝင်းရဲ့ အသံကိုလှမ်းကြားရတယ်။ မြင့်ဝင်းမျက်လုံးမှိတ် ထားလိုက်တယ်။ သီချင်းတအေးအေးနဲ့ ဝင်လာတဲ့ သိန်းဝင်းက အခန်းထဲတန်းဝင်ပြီး အဝတ်အစားလဲတယ်။ ပြီးတော့ မြင့်ဝင်းအိပ်နေပြီအထင်နဲ့ မြင့်ဝင်းနောက်ဝင်အိပ်ရင်း သိုင်းဖက်လိုက်တယ်။
သည်ညတော့ အပီပြင် ဂိုးသွင်းရဦးမှာပေါ့လေ။ ဟင်းဟင်း…. ပယ်နယ်တီ နဲ့နိုင်တယ်။ အခုငါလည်း ပယ်နယ်တီသွင်းမှပဲ နိုင်မှာလား။ ဒိုလေးက ဂိုးသွင်းကောင်းသလို ကက္ကိုလ်ကိုင်းက သိန်းဝင်းကလည်း ဂိုးသွင်းကောင်းပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အခုချိန်အထိ သိန်းဝင်းကတော့ ဂိုးသာသွင်းနိုင်နေတာ ဂိုးအဖြစ် မပြောင်းလဲနိုင်သေးဘူးပေါ့( ကလေးမရခြင်း)။ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပွဲအချိန်အတွင်းတက်နိုင်သလောက် ကြိုးစားရမှာပါပဲလေ။ ဘောလုံး ပွဲပြီးတာညဉ့်နက်လို့ ဇနီးသည်တောင် အိပ်နေပြီဆိုပေမယ့် သိန်းဝင်းက သူ့ရဲ့ နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတော့ မမေ့ပါဘူးလေ။ အဲ့တာကတော့ မြင့်ဝင်းလေးကို ဂိုးသွင်းဖို့ပါပဲ။ ဂိုးအဖြစ်လည်း ပြောင်းလဲချင်နေလှပါပြီလေ။ အတွေးများစွာနဲ့ သိန်းဝင်းတစ်ယောက် ကျေကျေနပ်ပြုံးရင်း မြင့်ဝင်းကိုနောက်ကနေ သိုင်းဖက်ထားတဲ့ သူ့လက်တွေက နို့တင်းတင်းတွေ ဆီကို ရောက်သွားပြီး စတင်နယ်ပါတော့တယ်။ဤဖြစ်ရပ်များမကြာမှီ ၁၁လအတွင်း သိန်းဝင်းနဲ့ မြင့်ဝင်းတို့၏ ဘဝလေးထဲ ကလေးတစ်ယောက် စတင် ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ တရပ်စပ်ဆိုသလို သားသမီးများထွန်းကားလေတော့၏။ အခုဆို သိန်းဝင်းတစ်ယောက် ဂိုးသွင်းကောင်းတဲ့ တိုက်စစ်မူးဆိုပြီး မိတ်ဆွေတွေကြား ဂုဏ်ကြွယ်နေရပြီလေ။ ပြီးပါပြီ